Ao anatin'ny alahelo ny frantsay amin'izao. Hatramin'ny nanoratanay, tsy mbola fantatra ny fototry ny afo saingy raha ny resaka mandeha dia nisy fanamboarana tao amin'ity fiangonana vakoka ity. Toerana manan-tantara ho an'ny mpino kristianina sady anisan' ireo tranainy indrindra maneran-tany. (850 taona) ny Notre Dame de Paris ary saika hita ao anaty boky malaza soratan'ireo kalaza amin'ny haisoratra toa an' i Victor Hugo,... Na koa horonantsary malaza toy ny “The Da Vinci Code” . Mampalahelo ny tranga, indrindra amin'izao ankatoky ny fetin'ny paska izao. Naneho ny alahelo ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. Raha tokony hanao fanambarana momba ny hetsika "gilets jaunes" omaly izy dia voatery naato izany. Mampatsiahy ny fahamaizan' ny Rovan' i Manjakamiadana teto Antananarivo Renivohitra 24 taona lasa izay ity loza ity ; ary efa mandeha sahady ny resabe fa mety misy ambadika politika satria anatina krizy lehibe noho ny hetsiky ny “gilets jaunes” i Frantsa ankehitriny ary tena latsaka ambany be ny fankafizan’ny Frantsay ny filoha Macron. Sarotsarotra mantsy ny hinoana fa hoe resaka tsy nahy na noho ny ankison’aratra (court circuit) no nahatonga ny afo satria henjana sady hentitra ny fiambenana sy fanaraha-maso ny asa fanamboarana natao tamin’ny Notre Dame de Paris. Andrasana ny ho tohin’ny fanadihadiana !